Kuratidza zvinyorwa neelebheri zvirongwa zvekuona
Orange 3 & Visual Kurongwa
Orange chiitiko chikuru chemigodhi data kune vese vanotanga uye masayendisiti ane nyanzvi yedata. Iine mushandisi wayo mushandisi, vashandisi vanogona kutarisa kuongorora data panzvimbo yekunyora kodhi, iyo inoitisa magadzirirwo akaomeswa ekuongorora data pombi. Data minerals yakanangana nezvinhu zviri muOrange, kuongororwa kwedatha kunoitwa nekuisa zvinhu muzvinhu zvinoita basa. Chikamu chega chega, chinodaidzwa kuti widget, chine basa rekuwanikwa kwe data, kuparura, kuona, kuenzanisa kana kuongorora. Kubatanidza majeti akasiya siyana muyekufambiswa kwemhepo kunokubvumira kuti ugadzire zvirongwa zvakaoma zvekuongorora dhata pabhururuka. Iine raibhurari yakakura yewadhi, haungasarudzwe. Mamwe majeti amwe anowanikwa kuburikidza nekuwedzera-maawa kuti ape zvakanyanya kutaridzika uye themed research. Inopindirana Dhata KuongororaOrange majeti anotaurirana nemumwe. Ivo vanogamuchira yekudha data uye vanotumira yakadururwa kana kuti yakagadziriswa data, mhando, kana chero chinhu chinoitwa newijeti pazvingabuda. Ngatitii tanga neFajeti widget iyo inoverenga data uye inobata ...